Khaladaadka amniga ee MacOS, doll Steve Jobs, ku deeqa Apple Pay, macOS High Sierra 5 beta 10.13.2, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
Ugu dambayntiina Diseembar ayaa timid oo ay la timid Axaddii ugu horraysay ee isku mid ah, axad aan caadi ahayn oo taasi waa in dukaamadu ay bilaabaan inay furaan taariikhaha kirismaska ​​iyo inbadan oo idinka mid ah Waxaad naga aqrisan doontaa moobilladaada intaad ku raaxeysaneyso dukaameysiga.
Anaga, oo furan maalin kasta oo sanadka ah, waxaan ku soo laabaneynaa soo uruurinta cusub ee wararka ugu caansan ee ku saabsan alaabada Apple.
Waxaan ku bilawnay isku soo aruurinta warka noo sheegay ee ku saabsan ku soo noqoshada suuqa doll ee Apple lafteeda mamnuucday waqtigaas. Waqtigan xaadirka ah maahan inaan ogaanno waxa ay ku darsadeen Jobs shirkadda. Apple wuxuu hubiyaa xuquuqda Steve Jobs iskana ilaali ugu badnaan sawirkaaga. Haddii aan ogaanno, marar dhif ah ayaan aragnaa funaanado, bakeerro, ama shay kale oo leh sawirka Shaqooyinka. Laakiin taageerayaal badan oo sumadda tufaaxa ah, waa astaan ​​waxayna jeclaan lahaayeen in si uun loogu matalo, tirada Steve Jobs ama daqiiqado taariikhi ah oo shirkadda soo bandhigeysa badeecado calaamadeeyay hor iyo kadib.
Shirkii horumarinta ee 2017, waxaan ka baranay astaamaha iMac Pro. Saas ma aha, waxaan aragnay naqshadda bannaanka, maxaa yeelay bilo ka dib waxyaabaha ku jira bahalkan Apple weli waa sir. Dibad ahaan waxay na tusiyeen iMac la kulmaya kuwii isaga ka horreeyay ee naqshadeynta, laakiin wax kasta oo kale waa cusub. Laga bilaabo midabka, kani waa cirro madow oo dhalaalaya, dadka kale waxay dhahaan waa madow. Intaa waxaa dheer, waxay ku cusbooneysiisay ugu yaraan iMac Pro kumbuyuutarka. Muuqaalka ugu muhiimsan, marka lagu daro midabka u dhigma shaashadda, waa ka mid noqoshada keypad nambar ah oo lagu dhex daray kiiboodhka. Qodobkaan waxaan ku tusaynaa nuqul sax ah taas oo hadaba la iibinayo.
#GivingTuesday waa a dhaqdhaqaaq aan ruux lahayn faaiidada aduunka, kaas oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ugu baahida badan, iyada oo gacan laga helayo NGO-yada ugu muhiimsan, sida Laanqayrta Cas, Sanduuqa Duurjoogta Adduunka, (PRODUCT) RED ama DonorsChoose.org.
Toddobaad ka dib iyada oo aan lahayn noocyo beta ah, Apple toddobaadkan ayaa sii daayay beta shanaad ee macOS High SierraApple wuxuu sii daayaa macOS High Sierra 5 Beta 10.13.2 loogu talagalay horumariyeyaasha leh hagaajinta caadiga ah ee xasilloonida nidaamka iyo amniga. Waqtigaan la joogo waxay umuuqataa in isbeddelada ku yimid qaabkii hore beta ay yar yihiin, laakiin waa inaad inyar ka baarto si aad u ogaato haddii astaamo cusub lagu daro iyo in kale muhiim ka ah hagaajinta cilladaha caadiga ah.
Waxay u muuqataa taas Apple ayaa sii deyn doonta nooca ugu dambeeya ee macOS High Sierra 10.13.2 kahor Kirismaska haddii aan fiiro gaar ah u yeelano tirada noocyada ay tahay in aan taariikhda la galno, maadaama 5-taan nooc ay jirto meel yar oo wax lagu hagaajinayo mana aaminsani in sannadka cusubi imaan doono iyadoo aan la helin nooc kama dambeys ah ka hor.
Waad ku mahadsan tahay soo-jeediyaha horumariyaha Lemi orhan, waxaan ogaanay a u nuglaanta u oggolaaneysa marin u helka Mac-ga oo sidaas darteed dhammaan macluumaadkayaga, xitaa haddii aan haysanno qalab lagu ilaaliyo lambarka sirta ah. Soo-saarehan ayaa isla markiiba ku wargeliyay Apple isla marka uu ogaado dayacanka. Isticmaale kasta ayaa gali kara koontada maamulka, isagoo adeegsanaya magaca isticmaalaha "root" asagoon erey sir ah lahayn. Isla sidaas ayaa loo isticmaali karaa in laga soo galo shaashadda guriga. Waxaan ku tusineynaa sida loo ogaado u nuglaantaan iyo sida loo xaliyo ilaa Apple ay cillada ka saxeyso cusbooneysiinta soo socota.
Marka fikradda Apple ugu dambeyntii lagu caddeeyo adduunka ee wadista iskiis ah, iyaga oo ka tagaya soo saarista gawaaridooda si ay diiradda u saaraan nidaamka wadista gawaarida, ragga ka socda Cupertino ayaa ka shaqeynaya tikniyoolajiyadan laakiin waa inay bilow tijaabinta, Tijaabooyin sida iska cad aan lagu qaadi karin wadada, ugu yaraan hada iyo ilaa uusan nidaamku helin ugu yaraan heerka 4, heer uu gaari ku wadi karo iskiis u taagan markasta oo uu la socdo qof, kaas oo ku joojin kara gaariga dhacdo shil suurtagal ah.
Soo rar oo keydso faylasha fayl kasta oo kombiyuutarkaaga ah, kamarad ama kaarka SD daruuraha oo kala tasho taleefan, kiniin ama kombiyuutar Google Drive. Sida aad u aragto, waa hab loo shaqeeyo oo hadda la mid ah waxa aan ka helno iCloud Drive waana in muddo ah, macOS waxaan ku haysannaa iswaafajin otomaatig ah oo ah dukumiintiyada iyo faylalka Desktop.
Waxaan waxan oo dhan kuu sheegayaa maxaa yeelay maanta waxay ii sheegeen sidaas waxaad yeelan kartaa isku xirnaanta faylka si toos ah u dhexeysa Mac iyo PC adigoon la socon iCloud drive, maadaama iCloud Drive-ka lagaa rabo inaad ku darto lacag dheeraad ah oo dheeraad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Khaladaadka amniga ee MacOS, doll Steve Jobs, ku deeqa Apple Pay, macOS High Sierra 5 beta 10.13.2, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Sawirradii ugu horreeyay ee Dukaanka cusub ee Apple ee Brooklyn
Si toos ah uga wareeji faylasha waaweyn Mac-kaaga barnaamijka WeTransfer